Chigadzirwa che5G kubva kuChengdu Datang Kutaurirana Cable Co, Ltd chakabvumwa nemusika
Munguva pfupi yapfuura, Chengdu Datang Kutaurirana Cable Co., Ltd.yakabudirira kuhwina bhizimusi reChina Iron Tower Co, Ltd .5 G sub-chigadzirwa-leakage tambo uye zvishongedzo zvakanyanya e-commerce kutenga chirongwa kutanga, kuhwina zvikamu makumi mashanu. 5G inogonesa mhedzisiro ndeye b ...
Iwo anotambanudza ekushandisa mamiriro ezvinodonha coaxial tambo
ne admin pane 19-04-30
Mushure me3G, 4G yakagadziriswa zvakadzama. Parizvino, nharembozha iri kufamba yakananga ku5g. Muna 2020, bugle ye5g yekushambadzira application yakarira, uye nyika dzese pasi rose dziri kushingairira kusimudzira maitiro e5g. Mumakore achangopfuura, Ch ...
Musika wepasi rese usingadziviriri moto tambo unosvika 1.76 bhiriyoni emadhora ekuUS muna 2018
ne admin pane 18-06-14
Sekureva kwemushumo uchangoburwa wemisika nemisika, musika wepasi rose usingadziviriri moto tambo unotarisirwa kukura kubva pamadhora 1.76 bhiriyoni muna 2018 kusvika kumadhora mabhiriyoni 2.06 muna 2023, iine CAGR ye3.2% panguva iyi. Iyo yepasi rose moto inodzivirira waya musika w ...
Ramangwana rakajeka reCable indasitiri
Nekukurumidza kukura kwehupfumi hweChina, waya uye tambo yekugadzira indasitiri, sechikamu chakakosha chesimba reindasitiri, iri kuwedzerawo. Kunyanya mumakore achangopfuura, hupfumi hweChina hwakatarisana nedambudziko ...
Chengdu Datang Kukurukurirana Cable Co., Ltd. yakahwina mibairo miviri yechivakwa chakangwara mumusika weChina
ne admin pane 17-11-30
Musi waNovember 16, "Intelligence" inonakidzwa nemukana we "kuvaka" hunyanzvi, pasi pekutungamirwa kweInjiniya Inogadzira Dhizaini YeChina Ongororo uye Dhizaini Association uye inotsigirwa neBeijing "Intellig ...
Chengdu Datang Kukurukurirana Cable Co., Ltd. yakakunda iyo yepamusoro gumi yakazara wiring muangwara yekuvaka indasitiri
ne admin pane 17-11-18
Yegumi nemasere China International Building Intelligence Summit yakaitwa musi waZvita 7 kuGuangzhou Oriental Hotel. Ese matunhu edunhu masisitimu, vatengesi vechiteshi, vagadziri, vashandisi vekupedzisira uye nekuvaka vakangwara vanozivikanwa nyanzvi uye vanopfuura 1000 ...
Chengdu Datang Kukurukurirana Cable Co., Ltd yakahwina rukudzo rwekupedzisira muhungwaru yekuvaka indasitiri- Top 10 generic cabling Brand Awards muna 2015
ne admin pane 15-12-15
Chiitiko chegore negore chepasi rose - China International Building Intelligence Summit China China International Building Intelligence Summit 2015 (yakapfupikiswa seCIBIS) inofananidzwa nemagumo ekupedzisira, hunyanzvi uye kutema kwevakangwara ...
Dubai Gitex Chiratidziro
18 Gumiguru 2015, Dubai, UAE, Zuva rakanga richipisa. Muguta rino rinodziya uye risinganzwisisike, Chiratidziro chakakura kwazvo chekuratidzira uye maindasitiri eIT kuMiddle East ——GITEX Technology Vhiki 2015 (inonzi Dubai) yakavhurwa kwazvo. Dub ...
Chengdu Datang Kukurukurirana Cable Co., Ltd. yakahwina mubairo "yekutanga batch yehunyanzvi yakajairwa zvisikwa nzvimbo muSichuan Province"
ne admin pane 15-05-07
Chengdu Hi-tech West District ndiyo yekutanga nyika yepamusorosoro indasitiri yekumisikidza kuratidzira nzvimbo ine yakajairwa hunyanzvi seyakakosha yezvinyorwa. Iyo Sichuan Yemhando Yekutarisa Bureau uye iyo Science uye Technology department yakatanga iyo f ...